Diyaarado Duqeyn ka geystay qeybo ka mid ah Gobolada Jubooyinka – SBC
Diyaarado Duqeyn ka geystay qeybo ka mid ah Gobolada Jubooyinka
Goor Maanta Duhurkii ah waxaa la xaqiijiyay in ay diyaarado nooca miiga ah ay duqeyn ka geysteen degmada jilib ee gobolka Jubada Dhexe.
Mid ka mid ah odayaasha dhaqanka oo ku sugan halkaasi islamarkaana la hadlay qalabka warbaahinta ayaa xaqiijiyay in diyaaradaaha duqeynta duqeynta geystay ay ahaayeen 2 diyaaradood oo nooca somaalidu u taqaan Miiga ah ,
waxa uu intaasi ku daray Oadaygaasi in ay duqeyntaasi ku geeriyoodeen dad ka badan 3 qof halka in kalena ay dhaawac yihiin, waxaanu raaciyay intaasi in dadka geeriyooday ay ka mid yihin dadka deegaanka .
Lama yaqaan waxa ay ahaayeen diyaaradaha duqeynta ka geystay Jilib, balse waxaa ay rumeysanyihiin dadka deegaanka in diyaaradahaasi ay qeyb ka yihiin kuwa mudoyinkii ugu dambeeyay duweynta ka geysanayay koonfurta Dalka siiba gobolka J Dhexe, kuwaas oo baaci ku haya xarakada Shabaab Almujaahidin.
warka waa sax, sida aad qorteen hadi an idinku sii daro lada mig waxa laga lahaa kenya. Laba miiga waxay nagu soo mareen xeroyinka qaxoota dadaab maanta waqtiga salada duhurka lagu jiray iyagoo ku sii jeday dhanka xadka somaaliya